नेपालमा पनि कोरोना भएको पुष्टि, बीरगञ्जका एक ब्यापारीमा देखियो कोरोना ! सेयर गरौ « Online Tv Nepal
नेपालमा पनि कोरोना भएको पुष्टि, बीरगञ्जका एक ब्यापारीमा देखियो कोरोना ! सेयर गरौ
Published : 22 March, 2020 7:32 pm
नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ । पर्साको वीरगञ्जमा एक जना ब्यापारीमा कोरोना भएको पुष्टि भएको हो । उनी बीरगञ्जका ब्यापारीक घरानाका ब्यक्ति हुन् । उनलाई कोरोनाको शंका लागेपछि घरमै चिकित्सक बोलाएर सल्लाह गरेका थिए ।
चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम बीगरञ्जको गण्डक अस्पतालमा पुगेका थिए । सो अस्पतालले उनलाई थफ उपचारका लागि भारतको पटना रेफर गरेको थियो । पटनामा गरिएको स्वास्थ्य परिक्षणका क्रममा उनलाई कोरोना भएको पुष्टि भएको हो ।
ति ब्यापारीलाई कोरोना भएको पुष्टि भएपछि उनका परिवारका सबै सदस्यलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । बिरामीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको भारतस्थित पटना मेडिकल कलेजको पुष्टि गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जनाएका छन् । ६ दिन अघि उनी वीरगञ्जको गण्डक अस्पतालवाट भारतको पटना पुगेका थिए । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुकुमार कार्कीले सो सो कुरा पुष्टि गरेका छन् ।